6000 ft. + Oo ah Maandooriyaha Kaarboon-ka-soo-saaray oo laga Soo Qaaday Ocean Cay, Jasiiradda Bahamas - Ellicott Dredges
Bambooyinku waxay gaarsiiyaan Aragonite Slurry 6,000 cagood oo ku yaal Mashruuca Macdanta Bahamas ee loogu talagalay Marcona
Source: Qodista Dunida & Dhismaha Badda
Xarunta wax soo saar ee aragonite ee u dhow Bimini, Bahamas waxay u baahan tahay bamgareynta macdanta isku-darka ilaa xero isku-dhafan ka dibna iyada oo loo marayo 6,000 cagaha qadka si warshad dewatering ku taal Ocean Cay, jasiirad aan dabiici ahayn oo u dhow.
The Warshadaha Marcona Ocean qalliinku wuxuu adeegsadaa 24-inch Ellicott® jeex jeex jeexjeexa "Allan Judith". Doomaha waxay u gudbineysaa qulqulka markabka "Guthrie III", halkaas oo taraafikada iyo baaxadda weyn lagu baaro, ka dib wuxuu galaa haanta cufnaanta leh waxaana lagu qaadaa boqolkiiba 30 ilaa 35 boqolkiiba.
Aragonite waa qaab saafi ah kaalshiyamka kaalshiyamka ah (CaCO3) kaas oo la tartamaya lafaha gidaarka Mareykanka. Waxay ku dhacdaa balaayiin tan oo ah Bangiga Grand Bahamas waxaana loo sameeyay roobab ka yimaada biyaha badda. Waxaa loo isticmaalaa ujeeddooyinka sida soo-saarka sibidhka, soo-saarka dhalada, xaddidaadda beeraha iyo u-takhalusidda wasakhda aashitada ee shirkadaha kiimikada. Maaddadu waxay leedahay qaab joogto ah, wareegsan, qaab dhismeed hadhuudh ah oo aad u hooseeya birta iyo cilado kale.
Marcona ayaa macdan qodista ah oo dhererkeedu yahay 22 mayl, dhererkeedu yahay laba mayl oo ballac ah iyo toban illaa xNUMX cagood qaro weyn oo ku dhex jira biyaha gacmeed ee u dhow Bimini.
Waxaa laga sameeyay laba goobood oo kale, ama jasiirado, iyadoo la adeegsanayo gooyo goobeed "Allan Judith" iyo "Dagaalyahan Reer Galbeed ah", dib u soo kabashada Ocean Cay waxay qaadatay hal sano in la abuuro 65 hektar. Tan iyo markii la balaadhiyay ilaa 90 hektar. Ellicott® dredge brand waxay u adeegtay si la isku halleyn karo oo ah aaladda koowaad ee qodista miinada muddo ka badan 20 sano.
Warshadda ka shaqeysa jasiiradda waxay ka kooban tahay kala-soocidda 'cyclone' 12 cyclone iyo shaashado naxdin leh 12 oo yareynaya waxyaabaha biyaha ku jira boqolkiiba 20. Aragonite ayaa markaa kadib lagu wareejiyaa suumanka dayrka oo la galiyaa hal baalasheeyayaal baalal, oo ku dhejiya barkadda tooska ah ee quudinta suunka markabka. Maaddada ayaa lagu raran yahay maraakiib qiimahoodu yahay 3,400 tan saacaddiiba.
Shirkadda waxay adeegsaneysaa markab 70,000 DWT suunka-iskiis u dejinaya si ay ugu rarnaato waxyaabo badan. Markabkani wuxuu ku dejin karaa xaddiga 4,000 tan saacaddiiba. Safarrada gaagaaban, doomaha badda mara iyo maraakiibta xaddidaadda waqtiga waxaa loo isticmaalaa in lagu soo dejiyo sheyga.
Warshadaha Marcona Ocean waxay leeyihiin heshiis dheer oo ay la leeyihiin dowlada Bahamas si ay uga faa'iideystaan ​​dhamaan aragonite iyo waxyaabo kale oo la isku halleyn karo oo ku yaal afar meelood oo waaweyn oo dhigaal ah - Bimini, Joulter's Cay, Tongue of the Ocean iyo Schooner's Cay. Debaajiga waa 55 mayl bariga Miami, Florida, badeecadana waxaa loo dirayaa suuqyada East Coast iyo Gulf Coast.
Waxaa laga daabacay Dredging World & Marine Construction